Iyini isikweletu samabhuku? Bheka incazelo kuhlaziyi yezimali
Qala ukubolekisa Wiki Encumbrance
Iyini isikweletu sencwadi?
Leli gama Encumbrance uyokuthakazelisa, uma unesithakazelo kumhlaba wangempela noma ukuboleka imali. Le mboleko ingena kuphela kwirejista yomhlaba enkundleni yesifunda, lapho ubufakazi bakholwa khona. Ufuna ukwazi ukuthi leli gama linamayelana nokuboleka imali. Uma uhlela iphrojekthi yokwakha noma yokuthenga impahla futhi awunayo imali eyanele yokuthenga khona-ke uzophinde ubheke ukuxhasa ngemali ngemali mboleko noma mboleko efanayo. Ukuze uvikele le mboleko, ibhange lizobe lifaka irejista yomhlaba ezweni lokubhalisa irejista lakho kwisigaba III serejista yomhlaba ngokulandela inani lemali mboleko.
Ukuphepha kuhlotshaniswa nesikweletu sencwadi yesikhathi
Uzokwazi ngokwakho ukuthi igama lokuphepha nokuthembeka lihlobene eduze nesikweletu kanye nemali mboleko. Ukuze kuvikeleke, ibhange lifaka imali ebolekwa ngalo ukuthi linikeza lapho kuthenga noma ukwakha impahla kubhalisi lomhlaba. Ezinye izikweletu zingangeniswa lapha futhi inani lemalimboleko liyazi umkhawulo. Kumele wazi ukuthi amabhange angabhalisa incwadi yokubolekisa incwadi kuze kube ngumkhawulo we-80% wexabiso lepropati. Wena ngokwakho ungalungisa lokhu kungena, ibhange lingalungiselela ukuthi lokhu namabhange nakho kuvikeleke amanye amadokhumenti ngencwadi yokubolekisa incwadi. Akuwona amabhange kuphela aphephile ngemali mboleko kanye nemalimboleko, kepha kubhalisa lomhlaba ungabhaliswa njengesikweletu sencwadi kanye nezinye izimangalo ezingadingeki ukuthi ziboleke imali. Isibonelo, esimweni sefa noma ekubunjweni komphakathi wezindlalifa, izikweletu zamabhuku zivame ukungena kwirejista yomhlaba yendawo. Ukuhlolwa kwencwadi yezindleko zomhlaba kungenziwa kuphela ngabantu abagunyaziwe abonisa isithakazelo kuleyo ndawo noma bahambisana nemali mboleko.
Ukubhaliswa kwangempela kwenkokhelo yomhlaba
Okufakiwe kwirejista yomhlaba esakhiweni noma esakhiweni akunakwenziwa ngomuntu noma ubani. Ukungena kwangempela kwenziwa ngeHhovisi lokuBhaliswa komhlaba, elitholakala enkantolo yesifunda efanele. Indawo noma impahla ihlala ilawulwa esigabeni sokwahlulela futhi lapha impahla ngayinye ibhalwe ngokufaka irejista yomhlaba. Ayikho inkatho engenamsebenzi. Ukuze uthole ukuqonda okwengeziwe nokuchaza, kusekhona umqondo incwadi mortgage, Kodwa-ke, kunezinhlobo ezahlukene zezindleko zomhlaba, njengokwesikweletu somnini womnikazi wangempela, lapho umnikazi wendawo noma umhlaba anikezela amalungelo angempela kumbolekisi ngalokhu kubhaliswa. Uma kukhona ukulibaziseka ekukhokhelweni nasekukhokhweni kwemali mboleko, umbolekisi usuvele wathola ubunikazi bomhlaba noma umhlaba. Isimo sasihlukile uma kwenzeka incwadi yecala eliphansi, lapha kuphela ukubolekwa okubizwa ngokuthi, kubika kodwa hhayi ekudlulisweni kwempahla. Iminyango yomthethosivivinywa womninikhaya iyakhokha futhi ivame ukuthatha indawo yokuqala yezindleko lezi zindleko. Ngezikhathi zokubheka izikweletu zamabhuku ezincwadi zanamuhla zibuye zibonwe ngedijithali futhi lezi zikhokhwa zesikweletu zitholakale esidlangalaleni. Ukuze sikuchazele kanye ncamashi lapho kukhulunywa khona leli gama, kufanele ukwazi umusho, ibhange lokubolekisa lizigcina lihambisana ne-book book ngokumelene nokukhokhwa kwemali mboleko. Ngakho-ke uma uthengisa impahla noma impahla ngosizo lwemali mboleko, ibhange lizobhalisa le ncwadi ehambelanayo nencwadi yomhlaba ebhalweni lomhlaba. Wena ubhekene nezindleko zalokhu kungena futhi uma ukhokha imali mboleko ngosuku olunye, kufanele ufake isicelo sokususwa bese ibhange likunika imvume yokukhansela. Futhi, kukhona futhi izindleko zokususwa ngendlela yezindleko kuwe.
ummeli wokulungisa izivumelwano
Isihloko sangaphambiliniInani eseduze
Isihloko esilandelayoThree-indlela ngezimali
AC Isaphulelo credit
Isilinganiso senzalo eguqulayo